‘अकाउन्टेन्ट’ नै राखेर अपार्टमेन्टमा यौनधन्दा ! – Hamro Nepali Samachar
Home/ समाचार/‘अकाउन्टेन्ट’ नै राखेर अपार्टमेन्टमा यौनधन्दा !
काठमाडौं । प्रहरी नै ग्राहक बनेर ललितपुर महानगरपालिकाको कासाबेल अपार्टमेन्टको ५ औं तल्लामापुगेपछि बाहिरिएको घटना हो यो । अपार्टमेन्टमा पुग्दा प्रहरी नै चकित पर्ने कस्तो छ त यो घट्ना ?
प्रहरी ग्राहक बनेर अपार्टमेन्टमा पुगेपछि जब उनीहरुले प्रहरी ग्राहक नभएको थाहा पाएपछि उनीहरु तित्तरवित्तर भए । अपार्टमेन्ट ग्राहक बोलाउने र धन्दा चलाउने कार्यालय बनाएको भेटियो ।
कोठाभित्र छिर्दा रक्सिका बोत्तल, अस्थायी साधन र लुगा छरपस्ट थिए । प्रहरी भएको थाहा पाएपछि सबैले आफ्नो परिचय लुकाउन नातेदार भएको बहाना बनाए ।
प्रहरीका अनुसार उनीहरुले अपार्टमेन्टमा यौनधन्दा मात्र चलाएका थिएनन्, कमाएको पैसा मिटरब्याजमा लगाउने गरेका रहेछन् । यसका साथै उनीहरु मानव बेचबिखनमा समेत संलग्न रहेको प्रहरीको अनुसन्धानमा खुलेको छ ।
यौनधन्दामा संलग्नलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न सफल भए पनि मानव बेचविखनमा संलग्नलाई पक्राउ पूर्जी जारी गरेर खोजी भइरहेको प्रहरी जनाएको छ ।
अकाउन्टेन्टको फायलअनुसार ३ वटा छुट्टाछुट्टै बुकिङ गरिएको फायल भेटिएको प्रहरीको अनुसन्धानमा खुलेको छ । प्रहरीका अनुसार एकजना ग्राहक यौन सम्पर्कबापत् ३ हजारदेखि १५ हजारसम्म लिने र कमिसन बापत् ल्याउनेलाई २५ प्रतिशत दिने गरिएको रहेछ ।